Isayensi - Wikipedia
Isayensi ibhizinisi elihlelekile elakha futhi lihlele ulwazi ngendlela yezincazelo ezivivinyayo nokubikezela ngomkhathi.  
I umkhathi imelelwa tincetu amaningi idiski emise yonkana isikhathi, oludlula kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla.
Izimpande zokuqala ze uku Igibhithe lasendulo ne Mesopotamiya cishe ngo-3500 kuya ku-3000 BCE.  Amagalelo abo imathemathiki, izinkanyezi, kanye umuthi yangena futhi yakhiwa AmaGreki Ifilosofi yemvelo ye zakudala endulo, lapho kwenziwa khona imizamo emisiwe yokuhlinzeka ngezincazelo zezinto ezisezweni lomzimba ngenxa yezizathu zemvelo. Ngemuva kokuwa koMbuso WaseNtshonalanga WaseRoma, ulwazi ngemiqondo yamaGrikhi lomhlaba lwehla lwasentshonalanga neNtshonalanga Yurophu phakathi namakhulu okuqala (400 kuya ku-1000 CE) weNkathi Ephakathi  kepha lwagcinwa emhlabeni wamaSulumane ngesikhathi se- AmaSulumane Yegolide Iminyaka.  Ukubuyiselwa kanye nokuthathwa kwemisebenzi yamaGrikhi nemibuzo yamaSulumane iye eNtshonalanga Yurophu kusuka ngekhulu le-10 kuye le-13 kwavuselela "ifilosofi yemvelo",  kamuva eyaguqulwa yinguquko yeSayensi eyaqala ngekhulu le-16  njengento entsha imibono kanye nokutholakele okusukile emibonweni nakwisiko lamaGrikhi langaphambili.     Indlela yesayensi yasheshe yabamba iqhaza elikhulu ekwakhiweni kolwazi futhi akuzange kube ngekhulu le-19 lapho izici eziningi zesayensi nezobuchwepheshe zaqala ukwakheka;    kanye nokushintshwa "kwefilosofi yemvelo" kuya kwisayensi yemvelo. 
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Isayensi&oldid=87410"
Last edited on 13 uNtulikazi 2021, at 22:29
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-13 uNtulikazi 2021, nge-22:29.